John Htingnan | The TRUTH will set you FREE!
Ndai zawn Myen myu sha ni gaw hpyen dap shagreng nna, Continue reading →
April 10, 2014 April 13, 2014 John Htingnan Hto ra le ra, John Htingnan, My Opinions
N chye ai majaw ndai blog post ka byin ai. N chye htai ai gasan ni grai law nga ai. N chye ai lam law law hte asak hkrung ra nga ai. N chye ai kun, n nga ai kun, n chye sai. N chye ai lam ni hte Ngai!
Maigan ga de jawng lung taw ai lahkawng ning pyi rai wa sai. Ndai zawn maigan ga du ai ten, maigan manang ni hte hkrum jahta byin yang, shanhte na nga sat nga sa, shanhteaarawn alai ni, anhte hte n bung ai lam ni law law nga ai. Ndai zawn n bung ai lam ni hpe, shinggan kaw na du wa ai ngai gaw, mu mada loi ai. Ndai zawn mu hkrup yang ngai hkrai san hkrup ai gasan ni nga ai.
“Ngai kadai rai? Ngai na nga sat nga sa gara hku rai? Ngai na nga sat nga sa lam gaw, kaga Myen mung na Myen, Sam, Hkang, Karen hpu nau ni hte hpa shaiata? Kaga jasam ni hte shai hkat ai lam ni, hpa ni rai ta? Bung ai lam ni mung nga ai kun? Kade daram shai hkat ai? Ngai na identity gaw hpa baw rai?” ngu ai gasan ni san hkrup ai.
Ndai zawn gasan ni pru wa tim, ngai kaw lu wa ai mahtai gaw kachyi sha. Re, anhte sha ai lu sha shai nga ai. Bu hpun sumraw lam pyi Jinghpaw labu gaw Myen ni na labu hte hpa shai ai n re. Manmaw Jinghpaw labu mung sam ni hte nau n shai hkat ai zawn zawn. Manau nau ai lam shai ai, htawngka ka ai lam shai ai. Anhteakahpu kanau, mayu dama, num wawn num la lai len ni shai ai. Teng sa, dai hta sung sung bai shang yu yang, shai hkat ai lam ni hpa naw nga ai kun? (Ngai n chye ai majaw teng sha san ai ga san re. Chye ai ni chyeju hte comment da rit.)
Moi ji jaw nat jaw prat ten, anhte Wunpawng ramma ni, tinang ra sharawng ai mahkawn hpe sumtsaw ga shaga na matu kumla amyu myu hte sumtsaw ga shaga ai nga na ga ai. Dai ni dai kumla ni gara du mat sai kun? Ji jaw nat jaw prat shaloi na lailen ni hte anhteahtung hkring gaw matut manoi nga taw ai raitim, ji jaw nat jaw makam hpe tawn kau ngut ai hpang htung hkring lailen hpe gaw n mai jen la sai kun? N la dap hpe tawn kau tim, wunpawng ramma ni hte seng ai kaga htung lai len ni hpe gaw n mai explore na i? (Nat jaw makam kaw na hpang wa ai Manau hpe dai ni du hkra Hkristan makam hte mahkri shawn (integrate) galaw let anhte jawm nau nga ga ai n rai ni?)
Anhte tsaban 20 kaw shangai di, tsa ban 21 kaw kaba wa ai ramma ni hpe htung hkring, labau hte seng nna, tsun sharin ya dat ai lam ni ram ram gawngkya lai wa sai. Dai ni du hkra mung htung hkring hte seng ai wunkat kasha langai lahkawng hta lai na, generation by generation sharin ya ai lam ni gawng kya dingyang re. Jinghpaw laika hpe nawku jawng kaw ginhtawng jawng dat ten sharin ya ai hta lai na, anhteahtung hking, labau hpe kaji ten kaw na atsawm n sharin ya lu shi ai. Ndai hku tinangaidentity, tinangalabau n chye aiamarang e, dai ni na Wunpawng ramma law law anhte hte hpraw n sam nau n shai hkat ai, Myen, Sam, Miwa, Karen ni hte dinghku de, amyu, ru sai gayau mat sai (Nyeatinggyeng ningmu san san re.). Dai hku she rai taw yang, du na ra ai ten hta mungdan lu na gaw yupmang hta kachyi mi jan ai shingran sha tai na re.
Maigan ni hte hkrum shaga ai law wa magang, tinang na identity hpe shadam kau magang rai wa sai kun? ngu tinang hkum tinang ga san bai san hkrup ai. Ngai na identity gaw hpa rai? Wunpawng ramma langaiaidentity gaw hpa rai? Wunpawng ramma langaiavalue gaw hpa ni rai? Wunpawng ramma langai hta n galaw n mai galaw ra ai labau jaw ai lit hpa ni rai? Wunpawng ramma langai hkan nang hkan sa ra ai lam Wunpawung htung lai len gaw hpa ni rai?
Identity tam shamat ai ngai hkrai ga san ndai ni htai n ma sai…
November 30, 2013 John Htingnan Uncategorized
Lai wa sai 2011 ning March shata ram hta ngai English hkaja nga ai jawng kaw American saranum hte shawng hkrum shachyen la lu ai. Shi hpe gara kaw na rai ngu san yang, “I am from Seattle, Washington” ngu bai htai ai. Dai shaloi na aten hta shanhpraw law lawni hte n hkrum ga shi ai ngai jawngma wa mau mat ai. Hpa majaw US kaw na rai ngu n shachyen ai rai ngu bai san yu yang, shan hte ni dai hku shachyen ai gaw htung hku re ngu na tsun dan ai (US na ni hti hkrup yang naw comment ya rit. Confirm galaw na matu. 😀 ).
April 5, 2013 April 20, 2014 John Htingnan Uncategorized
Facebook မသုံးတာကြာတာနဲ့အမျှ ပို့စ်တွေလဲမရေးဖြစ်တော့ဘူး။ ကျောင်းစာကြောင့်လို့ပဲ ဆိုချင်ပါတော့တယ်။ အခု facebook ပြန်သုံးတာ တစ်ပတ်ကာလအတွင်းဖတ်မိဖတ်ရာများ ရှိလာသည့် တကာလ ရေးစရာ၊တွေးစရာလေးလဲ ထွက်လာနေပါတယ်။ အခုပဲ ခုတလော YMCA မှာကျင်းပတဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအကြောင်း ဖွဘုတ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ ရေးချင်စိတ်တွေ တားမရတော့ပါဘူး။ ကျနော်ဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာမူလေးက သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ ဖက်ဒရယ်အကြောင်းဆွေးနွေးထားပုံလေးကို ထောက်ပြထားတာပါ။ ထောက်ပြချက်တွေက ကောင်းပေမဲ့ သူမထောက်ပြထားတာတဲ့နေရာမှာ “ဖက်ဒရယ်သံတွေညံနေခြင်းကိုတော့ မသက်မသာကြားခဲ့ရပါတယ်” ဆိုတာဟာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူဝါဒအကြောင်းဆွေးနွေးချက်ကို ဘာကြောင့်များ ဘဝင်မကျဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာပြီးကျနော်တွေးမိတာကနေ ဒီပိုစ့်ရေးဖြစ်ဖို့ စပါတော့တယ်။
ကျနော် တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်အနေနဲ့တော့ ဗမာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသား များအနေနဲ့ ဖက်ဒရယ်အကြောင်းအရာကို အဓိကထားဆွေးနွေးကြတာဟာ အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရယ်လို့ မမွေးဖွားခင်မှာ ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း နဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားများဟာ မတူညီတဲ့ တိုင်းပြည် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုစီမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရယ်လို့ မွေးဖွားလာတာဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးစီးဦးဆောင်မှုနဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ဝိုင်းထိုးကြပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရယ်လို့ဖြစ်လာတာပဲလို့ ကျနော်နားလည်ထားပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတာနဲ့ အခွင့်အရေးတန်းတူမညီမျှမှု၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု၊ စစ်တပ်အားကိုးနဲ့ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးတွေမှာ လက်ဝါကြီးအုပ်မှုတွေကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်အဓွန့်ရှည်နေရပြီး စစ်အာဏာရှင် ၂ဆက်မှာ တိုင်းပြည်ဟာလဲ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံစာရင်းထဲ ရောက်လို့သွားပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတစ်ခု ရှိပေမဲ့ တိုင်းရင်းသား ရှစ်မျိုးအကြား တန်းတူအခွင့်အရေးပေးမထားပဲ ဗမာတိုင်းရင်းသားများသာ ဘယ်သူမှမပေးတဲ့ အစ်ကိုနေရာဝင်ယူထားပြန်တဲ့အတွက် ကျန်တိုင်းရင်းသားများ ဖက်ဒရယ်ကိစ္စကို ပြောနေကြတာဟာ မထူးဆန်းဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုင်းပြည်ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဒီအကြောင်းအရာကို အကြေအလည်ဆွေးနွေးဖို့ လိုတယ်လို့လဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ Continue reading →
စစ်ပွဲရပ်ဖို. လက်ရှိအစိုးရနဲ. စစ်တပ်သာ အဓိက
January 12, 2013 January 12, 2016 John Htingnan Hto ra le ra, My Writings
ဒီညနေ မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေနဲ. စကားပြောဖြစ်တော့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ကေအိုင်အေက ဘာလို. အပစ်မရပ်တာလဲ၊ ကေအိုင်အေက ဘာကို တောင်းဆိုတာလဲလို. သူတို.မေးကြတော့ ကျနော်ဖြေသင့်တာကို တော်တော်ဖြေခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ကျနော်ဖြေခဲ့တာတွေက မထိရောက်ပဲ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုရှုပ်ထွေးသွားစေမယ်လို. ထင်မိပါတယ်။
ဆိုတော့ သူတို. မေးတဲ့ ကေအိုင်အေက ဘာလို.အပစ်မရပ်တာလဲ လို.မေးရင် ကျနော် ရှင်းရှင်းပဲဖြေချင်တာက ကေအိုင်အေ အပစ်မရပ်တာက မြန်မာစစ်တပ်ရဲ. ထိုးစစ်မရပ်လို.ဖြစ်တယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ. ထိုးစစ်ရပ်သွားရင် တိုက်ပွဲရပ်သွားမယ်၊ စစ်ပွဲပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်။ ကေအိုင်အေက မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်၊ မိုးညင်းတက်သိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမှာ ဗုံးခွဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေကို တက်လာတဲ့ ကျူးကျော်သူ မြန်မာစစ်တပ်ကို ခုခံစစ်အနေနဲ. တိုက်ခိုက်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်။
မြန်မာစစ်တပ်က ကေအိုင်အေကို မတိုက်ပါဘူး၊ ခံစစ်လုပ်နေတာပါလို. တချိန်လုံးညာနေသည့်တိုင် မြန်မာစစ်တပ် ထိုးစစ်လုပ်နေတာကို ပိုပြီးထင်ရှားစေတာက မြဝတီသတင်းဌာနအနေနဲ. လေယာဉ်နဲ. ဗုံးကြဲ့ပါတယ်ဆိုတာကို အတိအလင်းဝန်ခံလိုက်ခြင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒု-ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်မှ သူ. facebook ပေါ်မှာ မြန်မာစစ်တပ် တက်သိမ်းတဲ့ မြေပုံအတုများဖြန်.ဝေဝါဒဖြန်.ခြင်းတို.ကို ပိုမိုထင်ရှားစေပါတယ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးတာက ခံစစ်လို.ညာနေသည့်တိုင် မနေ.က (၁၁.၁. ၁၃ ရက်နေ.) က ကေအိုင်အေကို ဗုံးကြဲတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးပစ်ခံလိုက်ရတာကို နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှာ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ရတာပါပဲ။ ဒီလိုလေယာဉ်တွေ၊ တိုက်ရဟတ်ယာဉ်တွေ၊ ၁၀၅မမ အမြောက်ကြီးတွေ၊ ၁၂၅ မမ အမြောက်ကြီးတွေအပြင် တပ်မ ၂၂၊ ၃၃၊ ၈၈ အစရှိတဲ့ တပ်မကြီးများနဲ. ထိုးစစ်ဆင်နေလို.သာ တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုးစစ်ရပ်သွားရင် အပစ်ရပ်သွားမယ်၊ စစ်ပွဲပြီးသွားမယ်လို. ကျနော်မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရချင်ရင်တော့ တိုက်ပွဲရဲ. အခြေခံ ပြသနာကို ဖြေရှင်းမှရမှာပါ။ တိုက်ပွဲရဲ. အခြေခံပြသနာက နိုင်ငံရေးပြသနာဖြစ်တယ်။
နိုင်ငံရေးအရဖြစ်လာတဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို စစ်ရေးနည်းအရဖြေရှင်းလို.မရဘူး။ နိုင်ငံရေးနည်းအရဖြေရှင်းမှ ဒီပြသနာဟာ ပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်။ တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပြီးလို. အပစ်ရပ်ပေမဲ့ နောက်စစ်ပွဲတစ်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေတာမျိုးကို မလိုလားဘူးလို. ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် အတိအလင်းပြောဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်။ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုရယ်လို. ကမ္ဘာမှာဖြစ်လာအောင် ကချင်တွေလဲ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်ခဲ့တာမို. ဒီနိုင်ငံမှာ အားလုံးအတူနေနိုင်မဲ့ အခြေခံဥပဒေတစ်ခု ရှိရမယ်လို.လဲ ကေအိုင်အေက ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်။ ပြည်ထောင်စုမှာ စစ်တပ်တစ်ခုသေချာဖွဲ.လိုက် အဲ့ဒီပြည်ထောင်စုတပ်ဖွဲ.တဲ့နေရာမှာ အားလုံးပါဝင်ပြီး ကေအိုင်အေလဲ ပြည်ထောင်စုတပ် တစ်အခုအနေနဲ. ပါဝင်မယ်လို.ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဒါကိုလဲ လက်ရှိအစိုးရက လက်မခံပဲ နိုင်ငံရေးအခြေခံပြသနာကို စစ်ရေးနည်းနဲ. ဖြေရှင်းဖို.ကြိုးစားနေလို.သာ တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်လို. ကျနော်ယူဆပါတယ်။
ဒါကြောင့်ချုပ်ပြောရရင် ထိုးစစ်ရပ်ရင်၊ အပစ်ရပ်မယ်၊ ထိုးစစ်ရပ်ရင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဘက် သွားနိုင်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ စစ်ပွဲရပ်သွားလဲကချင်ပြည်နယ် အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းဖို.ဆိုတာ မသေချာသေးဘူးဆိုတာကို ကျနော် ဒီမှာ ရေးဖူးပါတယ်။ ဒီစစ်ဟာ အစိုးရနဲ. စစ်တပ် နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီး ပူးပေါင်းကြံစည်တဲ့ စစ်ဖြစ်တယ်လို. ကျနော့်ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဒီမှာ ဖော်ပြဖူးပါတယ်။ လက်ရှိလဲ အဲ့လိုယူဆနေတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် စစ်ပြီးတယ်မပြီးဘူး၊ ငြိမ်းချမ်းတယ်မငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတာဟာ ကေအိုင်အေအပေါ်မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမူတည်နေသော်လည်း အဓိကဟာဖြင့် လက်ရှိအစိုးရနဲ. စစ်တပ်တို.ရဲ. တိုင်းရင်းသားအားလုံး ကို မွေးရာပါ တန်းတူအခွင့်အရေးပေးချင်စိတ်ပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ကြီးမြန်မြန်ပြီးစေလိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ လူမှုဝန်ထမ်းများလဲ ထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေရပ်တန်.သွားအောင်၊ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်ထွက်လာအောင် မြန်မြန်ဝိုင်းဝန်းလုံ.ဆော်ပေးကြပါလို. နိုးဆော်လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
January 4, 2013 May 30, 2013 John Htingnan My Opinions, My Writings	Experiences, Media, Nationalism, Politics
အခုတလော KIO/KIA ဌာနချုပ် လိုင်ဇာနားမှာရှိတဲ့ လဂျားယန်တောင်ကုန်းတွေမှာ တိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ်နေပြီး စစ်အစိုးရ တပ်ဘက်က လေကြောင်းနဲ.ပါ ထိုးစစ်ဆင်နေတာ အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ရဟတ်ယာဉ် တွေအပြင် တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ.ပါ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်နေတာကို BBC လိုသတင်းဌာတွေမှာရော ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းဌာနအချို.တွေမှာပါတွေ.ကြရပါတယ်။ ဒီလို လေကြောင်းနဲ. ထိုးစစ်ဆင်နေတာဟာ အစိုးရအနေနဲ. ထိုးစစ်မဆင်ပါဘူးလို. စစ်စတင်ဖြစ်ပွားကတည်းကပြောနေတာနဲ. လုံးဝဆန်.ကျင်ဘက် ဖြစ်လို.နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတာက ဒီလိုလေကြောင်းနဲ.ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာကို စစ်တပ်နောက်ခံမီဒီယာတွေအနေနဲ. ဝန်ခံထားပြီး၊ ပြည်တွင်း ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြဝတီကထုတ်လွင့်သွားပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်စဖြစ်ကတည်းက စစ်အစိုးရအနေနဲ. ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာပါဆိုတာကို ပထမဆုံးဝန်ခံလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒီထက်ထူးခြားတာက သမ္မတရုံးက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်က ဒီလိုလေကြောင်းနဲ.ထိုးစစ်ဆင်တာကို သမ္မတရုံးက မသိပါဘူးလို. ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပြီး၊ အထူးခြားဆုံးကတော့ ဒီလောက်ကြည်းကြောင်း၊ လေကြောင်းနဲ. ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတောင် လိုင်ဇာကိုတက်သိမ်းဖို.အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလို. ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းက ပြောဆိုလိုက်တာပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်မှာလေကြောင်းနဲ.ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတာနဲ.ပတ်သက်ပြီး သမ္မတရုံးရဲ.ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သူထံ ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာမီဒီယာအချို.ကနေ မေးမြန်းနဲ. အခါ သူပြောလို.မကောင်းကြောင်း၊ ဦးအောင်မင်းတို. လုပ်နေသော ကိစ္စမို.လို. သူ.ဘက်က မပြောနိုင်ကြောင်း၊ သမ္မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ. သမ္မတရဲ. ညွန်ကြားချက်ကို အပြည့်အဝလိုက်နာမည်ဟုထင်ကြောင်း စသဖြင့်ပြောသွားတာတွေ.ရပါတယ်။ အခြားသတင်းတစ်ခုမှာတော့ လေကြောင်းနဲ.ထိုးစစ်ဆင်တာကို သမ္မတရုံးမှ မသိကြောင်းနှင့် သူ.အနေနှင့်လဲ မသိရှိရကြောင်း၊ လေကြောင်းဖြင့် ရိက္ခာချပေးသည်ဟုသာ သိရှိထားကြောင်းပြောဆိုသွားတာပါ။ ဒီမှာမေးစရာရှိလာတယ်။ သမ္မတရုံးအနေနဲ. လေကြောင်းနဲ. ထိုးစစ်ဆင်တာကို မသိဘူးဆိုတော့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်တာကို သမ္မတရုံးကမသိဘူးလို.ဗြောင်လိမ်ပြီး မသိကျိုးကျွှန်ပြုထားတာလား??? ဒါမှမဟုတ် စစ်တပ်က ပဲ အမှန်တကယ် သမ္မတမသိအောင် ထိုးစစ်ဆင်နေကြတာလား??? အဖြေကတော့ ရှင်းနေတာပါပဲ သမ္မဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရနဲ. စစ်တပ်က နှစ်ဖွဲ.ပေါင်းပြီး လိမ်ညာနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ 😀 Continue reading →
KIO/KIA: စစ် နဲ. ငြိမ်းချမ်းရေး
December 29, 2012 December 29, 2012 John Htingnan My Opinions, My Writings	History, Nationalism, Politics, Suggestion
ဒီနေ. သူငယ်ချင်းတွေနဲ. အပြင်အတူလျှောက်လည်ကြတော့ ပြောဖြစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းပါ။ သူတို.ကပြောပါတယ် လွတ်တော်ရှိနေပြီပဲ၊ ကေအိုင်အေတွေ ဘာလို.စစ်တိုက်နေသေးလဲ။ KIA က ငြိမ်းချမ်းရေး မလိုချင်ဘူးလား၊ လွတ်တော်ကနေ ပြည်နယ်တိုးတက်အောင်လုပ်လို. မရဘူးလား? Federal ဆိုတာကြီးကိုပေးလိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံကြီး တစစီကုန်ကွဲကုန်တော့မှာပေါ့၊ အစရှိသဖြင့်ပြောကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်လဲ တတ်သလောက်၊ မှတ်သလောက်လေးနဲ. ပြန်လည်ချေပခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့တာလေးကို သတိရပြီး ကျနော့်ကိုယ်ပိုင် ဘလောက် ကို update မလုပ်ဖြစ်တာ ကြာပြီမို. ပိုစ့်တစ်ခုအနေနဲ. ရေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ကချင်တွေ ငြိမ်းချမ်းရေး မလိုချင်ဘူးလား ဆိုတော့ ကချင်လူမျိုး တွေငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်လွန်းလို. ဒီနေ.ထိ စစ်တိုက်နေကြတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်…ကချင်တွေ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်လို.ပဲ လွတ်လပ်ရေးရဖို. ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အင်တိုက်အားတိုက်၊ အားတက်သရောပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ၁၉၄၉ ကနေတဆင့်ပြီးတဆင့် အင်အားကြီးမားလာပြီး မန္တလေးမြို.ကိုသိမ်းပိုက်၊ ရန်ကုန်အစိုးရရယ်လို. နာမည်တွင်အောင် တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Karen National Defence Organization ကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့ နေရာမှာ အားတက်သရောပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ကူမင်တန်တွေကို တိုက်တဲ့နေရာမှာ ကချင်တပ်တွေ ရွံ.ရွံ.ချွှံချွှံ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါတွေဟာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကြီးငြိမ်းချမ်းစေချင်လို.ပါ။ အခြားအခြားသော တိုင်းရင်းသားတွေ လက်နက်ဆွဲကိုင် တော်လှန်ပြီးနောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ကချင်တွေ KIO/KIA ဆိုပြီး တော်လှန်ရေးစခဲ့တာ ဒီနေ.ထိပါပဲ။
KIA က တော်လှန်ရေးလုပ်ပြီးအစိုးရ အဆက်ဆက်နဲ. အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ ပြည်ထောင်စုမှာ အတူနေချင်လို. ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ.အစည်းမှ မလုပ်ခဲ့တဲ့ အပစ်ရပ်စာချုပ်ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာချုပ်ဆိုခဲ့ကြတာအားလုံးအသိပါ။ အပစ်ရပ်ရေး၊ ဒေသဖွံ.ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရေး၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးလို. သတ်မှတ်ပြီး အပစ်ရပ်ခဲ့ကြတယ်။ အပစ်လဲ တကယ်ရပ်ခဲ့သလို ဒေသဖွံ.ဖြိုးရေးလဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဥပမာ- မြစ်ကြီးနား-လိုင်ဇာလမ်း ဖောက်ခဲ့တယ်၊ လက်ရှိမြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော်မြို.တွေကို မီး ၂၄ နာရီပေးနိုင်အောင်လုပ်တယ်။ မြစ်ကြီးနားမြို.ပေါ် လမ်းတွေကောင်းသွားအောင် ပြုပြင်တယ်။ အခြားအခြားသော စီးပွားရေး၊ ပညာရေး ဖွံ.ဖြိုးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမနဲ. ဒုတိယအဆင့်တွေကို လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ တတိယအဆင့်ကို ဆက်သွားဖို.ပြင်ဆင်နေတုန်းမှာ လက်ရှိ အစိုးရစစ်တပ်တွေရဲ. ထိုးစစ်ကြောင့် တိုက်ပွဲပြန်စခဲ့ကြရတာပါ။ Continue reading →